Puntland oo sheegtay in la billaabayo dhismaha waddada laamiga ah ee isku xirta Gaalkacyo iyo Garoowe | RBC Radio
Puntland oo sheegtay in la billaabayo dhismaha waddada laamiga ah ee isku xirta Gaalkacyo iyo Garoowe	Posted on March 20, 2017
Gaalkacyo (RBC Radio) Wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka Puntland ayaa ku dhawaaqday in xilli dhow la billaabayo dhismaha waddada laamiga ah ee isku xirta magaalada Gaalkacyo iyo Garoowe oo xarun u ah maamulka.
Shir looga hadlay dardargalinta dhismaha jidka laamiga ah ayaa shalay lugu qabtay magaalada Garoowe,waxaana ka soo baxay si deg deg ah in dhismaha waddada loo billaabo.
Arrimaha kale ee shirka uu quseeyay waxaa ka mid ah sidii waddooyin loogu diyaarin lahaa gaadiidka isticmaala jidka xilligan bur bursan ee isku xira Gaalkacyo iyo Garoowe inta la dhisayo.
Waxaa kalo diirrada la saaray in xilli roobaadka aysan saameyn ku yeelan dhismaha,iyadoo marka lugu ballaamay in dhismaha lugu billaabo goobaha usan wax saameyn ah roobka ku yeelan karin.
Wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka Puntland,Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo shirka guddoominayay wuxuu sheegay muhiimad weyn inay ugu fadhiso Puntland dhismaha waddada laamiga ah ee isku xirta Gaalkacyo iyo Garoowe.
“Si deg deg ah ayaa toddobadyada ina soo aadan loo billaabi doona dhismaha waddada laamiga ah,waana mid muhiimad weyn u leh Puntland”.ayuu yiri wasiir Cabdirashiid Maxamed.
Wasiirka wuxuu sheegay shirkadda dhiseysa waddada inay ballan-qaaday muddo sanad ah inay ku soo gaba-gabeynayso dhismaha.
Maamulka oo ayaa muddooyinkii dambe sidan oo kale u sheegayay in dhismaha waddada uu billaabanayo, kaaso loo arka inuu dib u dhac weyn ka muuqdo,dowladda ayaa sidoo kale lugu dhaliilay inaysan dardar-galin qorshaha lugu dhisayo waddada oo loo arka inay muhiim u tahay isku socodka bulshada Puntland.